Himalaya Dainik » त्यो दिन तिमीले सहयोग गरेको भए, म बाँच्ने थिए….
प्रमोद ले बाइक को स्पिड बिस्तारै गरेर पछाडि फर्किएर हेर्‍यो त्यहाँ सिटमा कोही थिएन, सिट खाली थियो…। फ़ेरी उसले साइड ऎना हेर्यो, पछाडि एउटि सुन्दर केटि सिटमा बसेकी थिइन ।
प्रमोद ले केहि बुझ्न् नै सकिरहेको थिएन कि यो के भैरहेको छ भनेर, उसलाई लाग्यो कि यो एक भ्रम हो । तर केहि समयपछि उसलाई महसुस भयो उसको काँधमा कसैले हात राखिरहेको छ भन्ने । प्रमोद ले साइड ऎनामा हेर्‍यो, त्यहाँ उसको मोटरसाइकल पछाडि सिटमा एउटी सुन्दर केटि बसेकी थिइन । प्रमोद ले बाइकको स्पिड बिस्तारै गरेर पछाडि फर्किएर हेर्‍यो त्यहाँ सिटमा कोही थिएन, सिट खाली थियो…। फ़ेरी उसले साइड ऎना हेर्यो, पछाडि एउटि सुन्दर केटि सिटमा बसेकी थिइन ।
प्रमोद ड-राउन थाल्यो उसले मोटरसाइकल को गति बढाउन थाल्यो । ४०, त्यसपछि ५०, फ़ेरि ६० त्यसपछि ७० फ़ेरि बिस्तारै १०० तर जुन तरिकाले मोटरसाइकल को स्पिड बढिरहेको थियो उसको काँधमा हातले जोडले पक्डिरहेको महसुस भैरहेको थियो …..
आत्मा भने त्यही नजिक रहेको रुख नजिकै थियो र उसको अगाडि त्यहीँ केटि उभिएर हाँसी रहेकी थिइन …. प्रमोद उ सँग रिसायो तिम्रो कारण ले बिनाकारण आज म मरे…
प्रमोद पसिनै पसिना भैरहेको थियो उसलाई लागि रहेको थियो किच-कन्य या भु-त को छाया ले उसलाई पछ्याइ रहेको छ भन्ने .. उसले बाइकको स्पिड अरु बढाउन थाल्यो १२० किलोमिटर को रफतार …
डर धेरै नै लागि रहेको थियो प्रमोद लाई म माथी के भैरहेको छ भन्ने बुझ्न नै सकिरहेको थिएन । त्यसबेला अचानक पुर्ब झापा बिर्तामोड काँकडभिट्टा बाट काठमाडौ तिब्रगतिमा जाँदै गरेको नाइट बस ले उसलाई कस्सेर ठ-क्कर दियो । जसमा काठमाडौ बाट पुर्ब तिर जाँदै गरेको गाडिको टायर ले टाउको र छातिमा कि चेर उसको घट्ना-स्थलमा नै मृ-त्यु भयो । प्रमोदको मृ-त शरीर रोडमा रग-त बगि-रहेको थियो… तर आत्मा भने त्यही नजिक रहेको रुख नजिकै थियो र उसको अगाडि त्यहीँ केटि उभिएर हाँसी रहेकी थिइन …. प्रमोद उ सँग रिसायो तिम्रो कारण ले बिनाकारण आज म मरे…
भन्दै प्रमोद हडबडाउदै निन्द्रा बाट ब्युझियो हेर्दा उ आफ्नो ओछ्यानमा थियो … । उसको पसिनै पसिनाले पुरै शरीर भिजेको थियो ..
मेरो कारण ले तिम्रो मृ त्यु भएको हैन यानकी तिम्रो कारण ले चाहिँ मेरो मृ त्युु भएको हो…।
तिमी यो मलाई के आ रोप लगाई रहेकी छौ..तब उस केटीले भनी: म पुरानो मेडिकल कलेजको नर्स हुँ बेलुका ७ बजे ड्युटी सकेर घर फर्किदै गर्दा आजभन्दा १ बर्ष दुई महिना ३ दिन अगाडि यहीँ ठाउँमा रातको ८ बजे मेरो स्कुटी पंन्चर भएको थियो । कसैले मद्दत गरिरहेका थिएनन्, म बिस्तारै-बिस्तारै स्कुटी धकलेर टाँढीमा रहेको आफ्नो घर तिर जाँदै थिए… तिमी बाइकमा आइरहेका थियौं । र मलाई समस्यामा देखेर पनि बेवास्ता गर्‍यौ … अलि पर पुलमा गएर बाइक रोकेउ र चुरोट तान्दै हाँस्न थाल्यौं ….
सायद मेरो कपडा कन्फर्टेवल थिएन दुई हातले स्कुटी धकेल्दा.. म रिसाउदै रोडमा स्कुटी धकेल्दै थिए … अचानक आजको जसरी नै तिब्रगतिमा अनियन्त्रित आइरहेको टिफर ले ठ क्कर दियो । र म यही काँस, सिरु को झाडिमा आएर खसे.. म घाइते अवस्थामा थिए ।
तिमी म हुने ठाउँ सम्म आयौं तर अर्काको लफडामा को पर्छ भन्ने सोचेर त्यस बस गएको ठाउँ तिरै तिमी आफ्नो मोटरसाइकल लिएर गयौं ….
सन्तोष कार्की मौसुफको फेसबुक बालबाट